Maxey tahay kalmadda halista amni dhalin karta ee ku jirtay wareysigii Fahad Yasin? | Entertainment and News Site
Home » English News » News » Maxey tahay kalmadda halista amni dhalin karta ee ku jirtay wareysigii Fahad Yasin?
Maxey tahay kalmadda halista amni dhalin karta ee ku jirtay wareysigii Fahad Yasin?
daajis.com:- Hey’adda Nabadusgidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa marxalado qalafsan wajahday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Dhowr taliye ayaa hey’adda maamushay intii uu jiray nidaamkii madaxweyne Farmaajo.
Waa goobta ugu weyn ee lagula dagaalamo kooxda Al-Shabaab. Marka la eego sida uu u dhisan yahay nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya, hey’adani waa midda ugu muhiimsan hey’adaha amniga ee waqtigaan.
Isbadbadalka tirada badan ee madaxda hey’adda, u ekeysiinta goob lagu iibiyo siyaasadda madaxda xukuna heysa iyo xog isku wareejin la’aanta madaxda hey’adda soo martay ayaa la aaminsan yahay inay kamid tahay waxyaabaha daciifiyey guulaha hey’adaan.
Hal arrin oo muddo aan jirin ayaase hadda soo korortay. Waqtigii hore madaxda hey’adda NISA soo martay ma faafin jirin sirta hey’adda waxayna dhinac isaga riixi jireen inay warbaahinta siiyaan xogaha amni oo ay hayaan ama kiisaska u baahan inay weli hey’adda sii baarto.
Hadda Fahad Yaasiin oo dhowr sano soo maamulay hey’adda NISA ayaa warbaahinta ku faafiyey waxyaabo haddii jiraan loo baahnaa inay janaalo kale la marsiiyo.
Balse wareysiga uu Fahad bixiyey dhawaan ayaa khubarada amnigu waxay kasoo dhex saareen qodob ay ku tilmaameen mid xambaarsan halis amni.
Fahad wuxuu wareysigiisa ku sheegay in looga baahan yahay saraakiisha hey’adda NISA inaysan wax xog ah la wadaagin agaasimaha cusub ee NISA Mahad Maxamed Salaad. Wuxuu sheegay in taliyaha cusub uu kamid yahay dadkii laga ilaalinayey sirta qaranka.
Haddii ay saraakiishu qaataan hadalka taliyahaas hore waxaa ka dhallan karta xasilooni amni iyo inuu dhaawac soo gaaro shaqada hey’adda ayey leeyihiin xeer dheerayaasha amniga.
Inkastoo aysan u badneyn in sarkaal hore u socod ah u dhag taagi doono hadalka taliye shaqada laga eryey, haddana arrintani waxay u baahan tahay foojignaan weyn, waxaana muhiim ah inay hey’adda si dhab ah ugu fahamto kala qeybin ayuu yiri mid kamid ah saraakiishii hore ee hey’adda oo aan la hadalnay.
Wuxuu soo jeediyey sarkaalkaas oo diiday inaan magaciisa xigano in agaasimaha cusub ee NISA laga rabo inuu khubaro sharci iyo saraakiil waaya-arag ah u saaro inay dhageystaan wareysiga uu bixiyey Fahad Yaasiin kadibna ay soo saaraan wixii ku jira oo noqon kara halis amni, gaf sharci, wax liddi ku ah xeerka hey’adda iyo midka ciidanka ama keeni kara qalalaaso amni kadibna laga doodo waxa ku haboon in laga yeelo.
Baaqa agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee ah inaan lala shaqeyn ama aan xog la siinin agaasimaha cusub ee hey’adda NISA ayaa dad badan oo arrimaha amniga ku takhasusa waxay ku tilmaameen kalmadii ugu halista badneyd ee ku jirtay wareysigii dheeraa ee uu bixiyey Fahad.
Waxaa la aaminsan yahay inuu Mahad Salaad dareensan yahay culeyska kalmadaan, waxay kaloo keeni kartaa ayaa la leeyahay in hey’adda laga saaro dadka lagu arko inay awaamiirtaan u hoggaansameyn ama laga yaabo inay fikirkaas dhinacooda ka iibinayaan.